DHAGEYSO:Musharaxiinta Soomaaliya oo sheegay inuusan waxba iska badalay banaanbax ay ku baaqeen | Star FM
Home Wararka Soomaaliya DHAGEYSO:Musharaxiinta Soomaaliya oo sheegay inuusan waxba iska badalay banaanbax ay ku baaqeen
DHAGEYSO:Musharaxiinta Soomaaliya oo sheegay inuusan waxba iska badalay banaanbax ay ku baaqeen
Golaha Midowga Musharaxiinta Soomaaliya ayaa kadib Go’aamo dowlada Soomaaliya oo looga hortagayo faafitaanka Cudurka Covid 19 waxya sheegeen inuusan waxba iska badalin go’aanka Banaanbaxa ay maalinka Jimcaha ah ku baaqeen.
Daahir Maxamuud Geelle oo ka mid ah Xubnaha Midowga Musharaxiinta ayaa sheegay in banaanbaxaan yahay mid Nabadeed dowlada iyo Hay’daha amaankana looga baahan yahay inay shacabka Fursad u siiyaan inay aragtidooda cabiraan isagoo dhanka kalena dowlada dhexe ee Soomaaliya ku eedeeyay inay Cudurdaar ka dhigayso inaan la isku imaan Karin cudurka jira awgiisa.
Shir ay Shalay isugu yimaadeen Wasiirada wasaaradaha qaabilsan ka hortagga Cudurka Coronaviur ayaa waxaa Warbixino looga dhageystay bahda Caafimaadka Soomaaliya, taasoo ku saabsan cudurka safmareenka ah ee Coronavirus.
Wasiirka Wasaaradda Warfafinta Xukuumadda Fedraalka Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe ayaa faah faahin ka bixiyay Go’aano kasoo baxay dowladda Soomaaliya oo la xiriira cudurka Coronavirus, oo maalmihii la soo dhaafay kiisas cusub laga helay Soomaaliya, waxaana Go’anada kamid ah.
Previous articleTirada dadka lagu xiray Myanmar oo ku dhow 500